Legal filazana Legal filazana
Ny votoatin'ny karazana rehetra tafiditra ao amin'ny Web Pages Torres BUS, SL, izay natao ho an'ny besinimaro amin'ny ankapobeny, manome ny fahazoam-baovao, vokatra sy ny tolotra nanome na nomen'ny Torres BUS, SL liana amin'ny azy ireo .
Ireo tranonkala ireo dia nomena tamim-pahatokiana an'i TORRES BUS, SL miaraka amin'ny fampahalalana avy amin'ny loharano anatiny sy ivelany amin'ny orinasa tenany; Noho io toe-javatra io sy ny habetsaky ny fampahafantarana malalaka, ny sasany amin'ireo angona na lahatsoratra hafa dia mety tsy ho tanteraka na havaozina tanteraka, na dia mampiasa ny ezaka tsara indrindra vitan'i TORRES BUS, SL aza ny TORRES BUS, SL dia mamaly sy manaiky fotsiny ny votoatin'ny TORRES BUS, SL ary fantatra amin'ny zon'ny mpamorona azy.
Ny fidirana amin'ny TORRES BUS, SL Web Pages dia tsy midika hoe karazana fiantohana, mazava ho azy fa nolavin'ny TORRES BUS, SL, mikasika ny mety ho an'ny ao anatiny ho an'ny tanjona manokana amin'ireo izay miditra amin'izy ireo.
Noho izany, na ny fidirana amin'ny vohikala toy izany sy ny fampiasana natao ny vaovao sy afa-po tafiditra ao dia tanterahina eo ambany hany andraikitry ny olona manao, sy Torres BUS, SL tsy mamaly Na ahoana na ahoana, ary tsy nisy fepetra na mivantana, na ankolaka, na consequential fahasimbana na very tombony, na inona na inona fahavoazana ateraky avy amin'ny fampiasana ny vaovao sy afa-po hita ao amin'ny vohikala ity, na ny fidirana amin'ny aterineto hafa na antoko fahatelo pejy afa-po amin'ny alalan'ny fifandraisana ary misy "rohy".
Koa Torres BUS, SL dia tsy mba tompon'andraikitra, na mivantana na an-kolaka, ny vokatra na ny tolotra voalaza eo, na nanolotra ny olona hafa, na fikambanana, na ho afa-po, ny vaovao, ny fifandraisana, na ny fanambarana ny hevitra na inona na inona na izay natsangan'ny antoko fahatelo ary azo jerena ao amin'ny tranonkala Web of TORRES BUS, SL.
Ny votoatiny azo takarina ao amin'ny TORRES BUS, SL Web Pages dia manana zo ara-tsaina sy ara-indostrian'ny TORRES BUS, SL na ny tompony hafa. Na ahoana na ahoana ny fidirana amin'ny Web ireo pejy midika izay mety ho fisintahana, fifindran'ny na tanteraka na ampahany famindrana ny zo toy izany, na misy manome zo ny fampiasana, fanovàna, fitrandrahana, fandikana, fizarana na mifampiresaka ireo bahoaka anatiny tsy ny maneho mialoha Ny fanomezan-dàlana manokana omen'ny TORRES BUS, SL na tompon'ny Fahazoandàlana momba ny zo voakasik'izany dia omena manokana, afa-tsy ny zo hijery sy hahazoana kopia manokana amin'ny votoaty toy izany raha toa ka ampiasaina araka ny fitsipiky ny tsara finoana ary na ahoana na ahoana niova mitoetra ao amin'ny aoriana nomaniny ho solon'izay manokana maka tahaka ny "zon'ny mpamorona" sy ny angona famantarana ny zon'ny Torres BUS, SL na tompon'ny hafa koa toy izany anatiny sy nanatanteraka ara-barotra tsy misy tanjona ary ho an'ny fampahalalam-baovao manokana ihany.
Torres BUS, SL dia manana zo hampiato fotoana voafetra, tsy misy filazana mialoha, ny fidirana ho any amin'ny tranonkala pejy noho ny azo atao mba hanatanteraka mila fikojakojana, fanamboarana, fanavaozana na fanatsarana azy. Tahaka izany koa, ny TORRES BUS, SL dia mitazona amin'ny zoma rehetra ny zotra tokana hanova ny fepetra ahafahana miditra amin'izy ireo, ary koa ny votoatiny misy azy.
Raha toa ka tena tonga hisoratra anarana toy ny mpanjifa Torres BUS, SL ary manome noho izany tanjona manokana ny tahirin-kevitra amin'ny maha-olona, ​​Torres BUS, SL mampahafantatra anareo ny fisian'ny iray automated rakitra manokana noforonin'i Torres BUS , SL mba hanao araka ny tokony fikojakojana sy fitantanana ny fifandraisana fifanarahana fa ny iray amin'ny Customer sy ny asa-baovao, fampiofanana sy ny varotra. Ny antontan-drakitra tahiry dia andraikitry ny TORRES BUS, SL izay voalaza etsy ambony. TORRES BUS, SL dia manaiky ny hametraka ny tsiambaratelo momba ny angona voatahiry ao anatin'ilay rakitra maoderina mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'izany. Customer atao koa ny mampiasa ny zony ny fahafahana miditra, rectification sy, raha ilaina, fanafoanana araka ny fepetra voalazan'ny lalàna momba ny Organic Fiarovana ny Tena Manokana Data 15 / 1999 avy 13 Desambra sy ireo fitsipika azo ampiharina.
Zavatra rehetra mifandray amin'ny Web Pages Torres BUS, SL dia fehezin'ny ny lalàn 'ny fanjakana ny Espaina sy manaiky ny fahefana kianja sy ny fitsarana ny amin'ny fanjakan'ny Espaina.
Ny fidirana amin'ny tranokalan'ny tranonkala / tranonkalan'ny TORRES BUS, SL dia midika ho fanekena ny fepetra rehetra voalaza etsy ambony. © Copyright TORRES BUS, SL. Ny zo rehetra voasoratra anarana sy voatokana. Rafitra misy eo ambany asa-bahoaka mialoha ny notary ny tanànan'i Toledo, D. Vicente Guaita Prada, tamin'ny 27 / 02 / 1992, 619 isan'ny firaketana an-tsoratra.
Legal filazana Martsa 7th, 2017Fampiofanana mpampiofana